KHITSOE MEMO (ခေတ်စိုးမှတ်စု): Japanese Flower Arrangement Show
KHITSOE MEMO (ခေတ်စိုးမှတ်စု)
Japanese Flower Arrangement Show
Ikebana Demonstration (Japanese Flower Arrangement Show)
On May 30 and 31, in Yangon, Ikebana Demonstration was co-hosted by the Embassy of Japan and the Japan Foundation.The two visiting professors of *Ikenobo School, Mr.Yasufumi Sasayama and Mr.Masafumi Ishiwata demonstrated the beauty of this traditional Japanese culture by creating both classic and free style works.
In two days, these young and dynamic professors attracted around four hundred audience by not only the works themselves but also by their interesting and inspiring talks.At the workshop, the interested audience had the opportunity to experience Ikebana themselves under the guidance of the professors. Around eighty people, both young and old, men and women did their utmost efforts to create their own Ikebana work.Some of the comments of the participants are as follows."I was very impressed with the way even old leaves and branches are used to create new beauty.""Ikebana is truly different from other western and Myanmar style flower arrangement.
Especially in western style, the arrangement of more flowers tends to be praised as more goregeous, however, I was struck with the simple beauty of Ikebana which is expressed by arrangingafew flowers and leaves.""I wish we could have Ikebana lessons in Yangon."The Ikebana Demonstration was extremely meaningful for the cultural exchange between Japan and Myanmar inasense that the audience became interested not only in the way flowers are arranged but also in the unique Japanese way of thinking and sense of beauty which is behind this most attractive traditional art of Japan.*Ikenobo isaschool of Ikebana, or Japanese flower arrangement. It is the oldest school of Ikebana in Japan, having been founded in the 15th century byaBuddhist monk, Ikenobo Senkai. The school, currently headed by its 45th generation grand master, Ikenobo Senei, is based in the Rokkakudo Temple in Kyoto. Additionally, it has various chapters around the world. Please refer to Ikenobo official website for further information. (http://www.ikenobo.jp/english/index.html)
Posted by Khinsoe Myanmar at 4:31 AM
Music Concert (5)
The Concert of Japanese Koto and Flute
Manga ( Japanese cartoon)
"Thway"film- written by Journal Gyaw Ma Ma Lay
KARIN & QUARTET Music Concert
ဦးဂိုအင်ဂာာ၏ "ဓမ္မနိုင်ငံမှာ ၁၃၅ နှစ်ကြာ
Jason Mraz mixes education, entertainment for 70,0...
ဆရာကြီးပါရဂူ ကွယ်လွန်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့် အောက်မေ့သတိ...
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်သို့ တမ်းတမိခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့်န...
HOME - Motion Magazine ဗီဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ဖြန့်တော့မည်...
ODC perform in Yangon
Japan-Mekong exchange opens
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Yangon Photo Festival
ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားဖျော်ဖြေပ...
မေတ္တာတရားနဲ့ လေးစားမှုရှိဖို့ ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့ ဟော်...
Japanese Traditional Dance & Music Performance/ Ja...
Creating objects of beauty from clay
Obama in Myanmar: How Ozomatli's 2009 visit served...
Walking free with Jason Mraz (The Nation)
မြန်မာနိုင်ငံတရားဥပေးများအက် ဥပဒေ (၁၈၉၈) ပုဒ်မ ၁၃(၁) အရ မြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးများတွင် အမွေဆက်ခံရေး၊ အမွေခွဲဝေရေး၊ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရေး (သိ...
အာဇာနည်များ နောက်ဆုံးခရီး မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မြင်ကွင်းကျယ် .
(၀မ်းအိုဝမ်း ကျော်ဝင်းမောင်ရေးသော မြန်မာ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် စာအုပ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်) ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ကို ဒဖနာ (မြေမြုပ်...
သန်းဝင်းလှိုင်- ဇူလုိုင် ၁၃၊၂၀၁၃ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဂဠုန်ဦးစော၏ စေခိုင်းချက်...
အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာ ကြေငြာစာတမ်း
အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာ ကြေငြာစာတမ်း အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာ ကြေငြာစာတမ်း (Geneva Declaration on Internet Freedo...
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်သို့ တမ်းတမိခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့်နှင့် လွမ်းရမိခြင်း ဂီတဆည်းဆာ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်သို့ တမ်းတမိခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့်နှင့် လွမ်းရမိခြင်း ဂီတဆည်းဆာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်သို့ တမ်းတမိခြင်း ၁၀နှစ်ပြည့်နှင့် လွမ်း...
ရှမ်းလူမျိုးစုအကြောင်း လေ့လာမှုတရပ် ဒေးဗစ် စကော့ မက်သီဆင် Wednesday, March 04, 2009 စာအုပ်စင်ကဏ္ဍ E-mail Print Share/Save/Bookmark မြန်မာနိုင...
သန်းဝင်းလှိုင်- စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ထင်ရှားသော စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သော ရန်ကုန်ဘဆွေကို ဧရာဝတီတိုင်း ဒေးဒရဲမြို့နယ် ...
မေတ္တာတရားနဲ့ လေးစားမှုရှိဖို့ ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့ ဟော်လိုကော့စ် အမှတ်တရနေ့
မေတ္တာတရားနဲ့ လေးစားမှုရှိဖို့ ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့ ဟော်လိုကော့စ် အမှတ်တရနေ့ မေစန္ဒီ-အတွဲ ၂၆၊ အမှတ် ၅၀၄ (၄-၁၀ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၁) "When Words ...